Qoraalka maqaalo had iyo jeer la iman waqtiyada. Taas macnaheedu waxa weeye in aad u baahan tahay si ay u qoraan cadaadis, oo tanuna waa kuma farxo, at dhan. Sidaa darteed, magalka kuwaas top 6 talooyin ku saabsan sida loo qoro maqaalka ugu fiican. Waxay kaa caawin doonaan inaad ku qorto kooban, inay dhibic iyo maqaalo xiiso leh wuxuu idin keeni doonaa darajooyinka wanaagsan.
1. Ururi fikirkaaga
Tallaabada Thevery marka hore waa in ay la yimaadaan horyaalka. Haddii aad hore u leedahay horyaalka, kaliya waxaad u baahan tahay in ay diiradda saaraan aad cilmi jihada saxda ah. Bilow ururinta ilo muhiim ah oo kaliya online, oo iyaga bookmark. Tani waa wajiga cilmi, sidaas oo kalena haatan uma baahnid inaad wax loo akhriyo wax walba si faahfaahsan. By badbaadinayo bookmarks kuwan, aad ku noqon karto iyaga oo u akhri si fiican ka hor inta aad dhab ahaantii ku qor. Haddii aad u baahan tahay inaad la timaado horyaalka naftaada u hubiso in aad ku qori doonaa somethingyou ku saabsan aad u wanaagsan at yihiin- waxa ay noqon hiwaayad, Falanqaynta nafsi shakhsiyeed, fikradaha on arrin lagu muransan yahay, iwm.
2. Hel caawimo haddii aadan haysan Time
Haddii aadan haysan waqti ama xirfadaha si ay u qoraan maqaalka wanaagsan ma mar dambe dib loo dhigo wax. Hubi in aad eegto ilaa dhawr dib u eegista ee essaywriters top iyo caawin. kooxda A xirfadeed ee qorayaasha ka koobanahay doonaa maqaalka oo dhan, waayo, aad wakhtiga ku qeexan. Dhamaan xuquuqda maqaalka waxaa loo wareejin doonaa inaad. Sidaa darteed, aad la wadaagi karto, print, Weeraryahanka iyo soo bandhigaan maqaalka sida abuurkiinna.
3. Midoobid Fikradaha ab Qormo ah
Marka aad kor loogu qaaday qoraal aad maqaalka, waxaad ogaatay in aad baddalo dhinaca jihada cusub aheen ujeedada hore. Sidaa darteed, had iyo jeer dib u tag oo u akhri bilowgii aad maqaalka, iyo isku dayaan in ay la mideeyo warqad oo dhan. Waa in aadan u ogolaan hordhaca, jirka ah ee maqaalka oo soo gunaanaday in ay 3 hay'adaha gaar ah. Wax walba oo loo baahan yahay in wax xunna qulquli, hab macquul ah. Wax macno ah ma haddii aad maskaxdaada beddesho, ama bedesho opinion on wax, kaliya waxaad u baahan tahay in la mideeyo wax kasta oo xunna.
AKHRI SIDOO KALE: QODOBO ARTICLE QORITAANKA - 6 QODOB EE QORAALKA Qormo A GREAT
4. Had iyo asalka waxaana Ilo aad
Xitaa haddii aad maqaalka waa qumman yahay ka dhibic naxwe iyo stylistic of view ... haddii ilo aanay xusay in waxa loo yaqaan Qishka. Waxaad xaqiiqdii doonayaa in aan ka fogaado dhibaatooyinka sida. Sidaa darteed, xataa haddii aad ku wareejin inyour erayo gaar ah wax ayaa laga wada hadlay bya actor caan ah, qoraa, ama siyaasiga, aad u baahan tahay in ay tixraacaan isha saxda ah. Xaqiiqada ah in aad tidhaahdaan erayadan oo u gaar ah qof kale fikrad ... weli ma aad fikrad.
5. Cinwaanka Mawduuca ugu Hawsha
Ha ku garaaceen agagaarka duurka u ... haddii aad macallinka aad loo xilsaaray mawduuc gaar ah, aad u baahan tahay in si sax ah in ka doodista. Xitaa haddii aadan jeclaan mawduuca aadan, waa in aad baadhitaan, oo dheeraad ah oo mawduucan ku akhriyey online. Markaasuu, bilaabi lawada aad maqaalka laakiin fiiro si wax looga qabto mowduuca loo xilsaaray. Ka jawaab su'aalaha posted, iyo dhamaadka laguu oggol yahay si ay u noqdaan a yar opinionated iyo soo bandhigaan aragtidaada ku saabsan mowduuca.
6. Isticmaal Dhowr Ilo
Ha heli xayiran leh internet-ka oo kaliya. Haddii aad qoraal ahaan maqaalka ku saabsan Taariikhda American tusaale ahaan, bilaabi raadinaya agagaarka guriga for qaamuusyo, buugaagta Thesaurus, DVD ee la xiriira filimada AmTop 6 Talooyin ku saabsan sida loo qor The taariikhda Essayerican Best, iyo majaladaha xitaa ka weyn la articles on taariikhda. Noocan ah "curinta" hubaal kaa caawin doona inaad qori maqaalo gaar ah. khayraadka Your aanay khasab ahayn 100% ilo online. Waxay noqon karaan ilo kasta, xataa wareysi sameeyay arday PhD History ama tusaale ahaan. Noqo hal abuur leh, maal waqti tayo galay cilmi-baarista iyo aad u maarayn doonaan si ay u qoraan maqaalka ugu fiican!
AKHRI SIDOO KALE: Waxyaabaha loo arkaa in ay Author a Great Private Curiska
BEST TIPS RAADINTA SHAQADA IYO FIKRADAHA EE ardayda Kuliyada
QAABKA AASAASIGA IYO QAAB-DHISMEEDKA OF THE Qormo
« Sida lagu Helo on Your College Professor ee Side Good ?
6 Talooyin Of Helitaanka Writers Qormo »